[Ukara] dr.fone Toolkit - Android mkpọchi ihuenyo Mwepụ nke PIN, Password, mkpisiaka & Nlereanya
dr.fone Toolkit - Android mkpọchi ihuenyo mwepụ
Wepụ gam akporo mkpọchi ihuenyo na 5 nkeji.
Wepụ 4 ihuenyo mkpọchi ụdị - ụkpụrụ, PIN, paswọọdụ & fingerprints.
Naanị wepụ mkpọchi ihuenyo, ọ dịghị data ọnwụ na niile.
Ọ dịghị tech ihe ọmụma chọrọ, onye obula nwere ike ijikwa ya.
Na-arụ ọrụ maka Samsung Galaxy S / Note / Tab series, na LG G2 / G3 / G4, wdg
N'agbanyeghị na ị chefuru paswọọdụ gị gam akporo mkpọchi ihuenyo ma ọ bụ dị nnọọ na-a abụọ n'aka na ngwaọrụ na amaghị mkpọchi ihuenyo si passcode, a gam akporo mkpọchi ihuenyo mwepụ na-enyere gị ka tufuo na-amaghị ama passcode na 5 nkeji, gụnyere ụkpụrụ, PIN, paswọọdụ na mkpisiaka. N'agbanyeghị ihe ọ bụla passcode ị na-ahọrọ, ị gaghị ida ọ bụla data na ngwaọrụ gị site na iwepu ya na a gam akporo mkpọchi ihuenyo mwepụ.
Kpọchiri Akpọchi gị gam akporo Ngwaọrụ?
Wepụ gam akporo mkpọchi ihuenyo na ọnọdụ dịgasị iche iche
Chefuru paswọọdụ mgbe mwube ya ogologo oge tupu
Wee na a abụọ n'aka gam akporo ngwaọrụ na-ekpochi ihuenyo
The paswọọdụ setịpụrụ gị na na ma ọ bụ ndị ọzọ
Akpọchiri ihuenyo ruru abanye na-ezighị ezi paswọọdụ ọtụtụ ugboro
Ike ịbanye paswọọdụ ruru a gbajiri ihuenyo
Ọtụtụ ọnọdụ dị otú a.
Wepụ mkpọchi ihuenyo na android
ị nwere ike wepu anọ iche iche nke ihuenyo mkpọchi: ụkpụrụ, PIN, paswọọdụ & fingerprints
Wepụ gam akporo mkpọchi ihuenyo na No Data Loss
Nke a gam akporo mkpọchi ihuenyo mwepụ naanị tufuo gị ekpochi ihuenyo na gam akporo ngwaọrụ. Ọ ga-agbanwe agbanwe ma ọ bụ hapụ ihe ọ bụla data na ya.
Na-arụ ọrụ dị ukwuu na Samsung na LG Devices
Nke a mkpọchi ihuenyo mwepụ maka gam akporo arụ ọrụ dị ukwuu n'ihi na ọtụtụ nke Samsung na LG ngwaọrụ. Ị nwere ike ịlele ndepụta ebe a .
Ị adịghị mkpa ịmụta nkà nke na kọmputa ma ọ bụ ihe siri ike. Jikọọ na ngwaọrụ gị na-agba ọsọ a gam akporo mkpọchi ihuenyo mwepụ. Mgbe ahụ ị na mkpa ịrụ otu click, na mfe otú ahụ.
Nke a mkpọchi ihuenyo mwepụ maka gam akporo software kpamkpam na-agụ-na-software. Ọ gaghị anọgide na, gbanwee ma ọ bụ ihihi ọ bụla data na ngwaọrụ gị ma ọ bụ na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Anyị na-gị onwe onye data na akaụntụ kpọrọ ihe. Ị na-na na mgbe niile bụ naanị onye nwere ike ịnweta ya.
Wepụ 4 Types of Android Screen mkpọchi
enweghị Data Loss
Nke a gam akporo mkpọchi ihuenyo mwepụ ike wepu passcodes nke ụkpụrụ, PIN, paswọọdụ na mkpisiaka. All nke ị nwere ike ijikwa ya. Ọ jụrụ dịghị tech ihe ọmụma. N'agbanyeghị ihe paswọọdụ gị bụ, ị gaghị ida ọ bụla data na gị na gam akporo ngwaọrụ. Ugbu a, ọ na-arụ ọrụ n'ihi na ọtụtụ Samsung ntị na mbadamba. Ndị ọzọ ụdị na-abịa ngwa ngwa.
Wepụ gị ekpochi ihuenyo n'ime 5 minites n'ụlọ.
100% Security Nkwa
Ị bụ naanị onye nwere ike nweta gị data na na akaụntụ
Ọ dịghị tech ihe ọmụma chọrọ mgbe niile.
Ị gaghị ida ọ bụla na ngwaọrụ gị.
1 GB ma ọ bụ karịa
Na-arụ ọrụ ọma na Samsung dee, chọta niile ihe i mkpa ha ma na-enwe nsogbu na S3 mini
Mkpa a merụsịrị! Egwu!
Ọ \_ 's kpọmkwem ihe m chọrọ. Ị na-azọpụta m data na-edozi nsogbu m ... Great!
Egwu! Kwesịrị ya.
Nwara kasị android software, naanị Wondershare ike ime ọrụ na-enweghị nsogbu. N'ihi!
9 Ụzọ uzo Samsung mkpọchi ihuenyo
Olee otú Ị kpọghee ekwt Samsung Galaxy S3
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na ị na-ekpochi nke gị gam akporo ekwentị
Olee otú Ị kpọghee ekwt gam akporo ekwentị na-enweghị PIN
Anọ Ụzọ Ị kpọghee ekwt / uzo gam akporo Nlereanya mkpọchi
3 Ụzọ Ị kpọghee ekwt Samsung Galaxy S5
Olee otú Gbanwee mkpọchi ihuenyo Wallpaper na android
Ụzọ Isi Gosi na Wi-Fi Password na android